Anyị nwalere Aukey LT-SL1 n'èzí ikanam ihe mmetụta ìhè | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere Aukey LT-SL1 ngagharị ihe mmetụta n'èzí ikanam
Ma ọ bụ na taa anyị nwere ọtụtụ ihe ngwọta iji mee ka ogige, ubi mkpụrụ osisi, ọnụ ụzọ ụlọ ma ọ bụ ebe ọ bụla chọrọ ọkụ ma anyị anaghị eji ọkụ eletrik ebute ihe ọ bụla. N'okwu a ihe ngwọta nwere ike ịbụ nke a Aukey LT-SL1 Ikanam ìhè na a obere anyanwụ panel n'elu nke ga-agbanye ọkụ oriọna ahụ ka ọ gbanye.
Ihe kachasị mma nke ụdị ngwaahịa a bụ nke ahụ a n'ezie gbanwee price Anyị ga-enwe ike ịkọwa mpaghara ma ọ bụ mpaghara gbara ọchịchịrị na-enweghị mkpa maka nrụnye gbagwojuru anya. Aukey nwere ihe ngwọta nye nsogbu ọkụ n'èzí na Aukey LT-SL1 bụ ihe akaebe doro anya na nke a.
1 Nzube na n'ichepụta ihe
2 Nkọwa nke
3 Igbe ọdịnaya na ọnụahịa
Nzube na n'ichepụta ihe
N'okwu a ka anyị mee nkenke dị mfe ma dị irè iji kwụnye ya na mgbidi. Auke LT-SL1, tinye smd LED A na-ekpuchi ha site na plastic ABS na akụkụ ndị ọzọ nke igbe ahụ bụ oji, yana mmezu nke ika ahụ n'ihu. Ọ na-agbakwụnye obere bọtịnụ na-esote ihe mmetụta ahụ nke na-enye anyị ohere iji aka anyị gbanye ọkụ ahụ, anyị ga-enwerịrị pịa maka sekọnd atọ ọ ga-agbanye, ee, ọ ghaghị ịbụ shit.
Ọ bụ eziokwu na imewe ahụ siri ike ma anyị enweghị ike ịsị na ọ dị ọkaibe ma, mana ọ bụ a n'ezie ọtọ ìhè na anyị nwere ike iji ya ebe ọ bụla ebe ọ dị ezigbo mma na mgbidi. Iji ọtụtụ n'ime ha n'usoro anyị nwere ike ịkọwa nnukwu ụlọ na-enweghị nsogbu n'ihi ịnọ n'èzí ebe ọ bụ na enyere ha aka ịnagide ihu igwe na-adịghị mma.
Nkọwapụta dị mfe ma dị irè maka iji ngwaahịa a, nke a bụ ihe n'ọtụtụ ọnọdụ na-efunahụ ya site n'eziokwu dị mfe nke imepụta ma ọ bụ karịa ihe ndị ọzọ. Na ogologo oge na oge nke oge ọ na-enwe ekele na ìhè ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ zuru oke na-enweghị nsogbu n'ihi ihu igwe na-adịghị mma (anyanwụ, oyi, mmiri ozuzo, wdg) na nke a bụ ihe Aukey na-enweta. Ndị a bụ LT-SL1 nkọwa:
Ike Ike: 4W
Ikanam Model: SMD2835
Ikanam ibu: 38 iberibe
Mbara Igwe: 6V 2,5W 18% arụmọrụ
Typedị Batrị: Batrị Li-ion Rechargeable (3,7V / 4000mAh)
Ọkwa nchedo: IP65
Na-egbuke egbuke Flux: 500lm
Ebe ntinye: 5 - 10m
Ihe ntinye aka: 120 Celsius
Net arọ: 433g / 0,95Ib
Akụkụ: 210 × 115 × 85mm / 8,27 × 4,53 × 3,35in
Ndụ bara uru: Oge 50000
Oge nkwụ ụgwọ:> 6 awa
Igbe ọdịnaya na ọnụahịa
N'okwu a, ihe anyị nwere n'ime ngwugwu ọkụ n'onwe ya bụ ihe niile dị mkpa maka ntinye ya. Otu nkọwa dị mkpa na mgbakwunye na nkedo 2 iji jide ya na akwụkwọ ikike ngwaahịa ahụ n'onwe ya, a na-agbakwunye ndebiri iji dozie ọkụ na mgbidi ọ bụla Site mfe na ngwa ngwa ụzọ. Ihe dị mkpa gbasara ngwaahịa ndị a bụ na ha dị mfe ịwụnye ma rụọ ọrụ, ihe m nwere ike gosi n'onwe ya na ọnwa abụọ na ọkara nke Aukey were.
Banyere ọnụahịa ahụ, o doro anya na anyị na-eche ihu maka ngwaahịa dị ọnụ ala maka mmadụ niile. Pricegwọ ya bụ ugbu a site na 25,99 euro ma ọ bụrụ na ịnweghị ogologo oge ịzụta ya, ịnwere ike ịnụ ụtọ mbelata nke 26% nke ọnụahịa ya na mbụ. Njikọ gị zụta na Amazon bụ ndị a.
Nyochaa: Jordi Gimenez
White ìhè ezi ọkụ
Anwụ ngwa ngwa na ihe
Ọnụahịa mma nke ìhè
Ọ ga-adị mma ịbawanye oke nke ihe mmetụta ngagharị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Anyị nwalere Aukey LT-SL1 ngagharị ihe mmetụta n'èzí ikanam
Russia jidere ọtụtụ ndị injinia maka iji kọmputa na-egwupụta bitcoin
Facebook ga-anwale bọtịnụ "Enweghị m mmasị" na ụfọdụ ndị ọrụ